MOFON’AINA ZOMA 09 NOVAMBRA 2018 – Athis Fanantenana
MOFON’AINA ZOMA 09 NOVAMBRA 2018
9 novambra 2018
13 Ireo rehetra ireo dia maty tamin’ ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana; fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo niarahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin’ ny tany izy.14 Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy.15 Ary raha tàhiny nahatsiaro ny tany nialany izy, dia ho nahita andro hiverenany.16 Fa amin’ izany ny tsara lavitra no iriny, dia ny any an-danitra; ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho an’ ireo Izy.
HEBREO 11 : 13-16
EFA NANAMBOATRA TANANA HO AN’NY MINO NY TOMPO
1- Ho an’ireo maty tamin’ny finoana
Tanisaina eo aloha ireo olo-malaza amin’ny finoana ao amin’ny Testamenta Taloha. Tsy ho diso anjara ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra izay niaina sy nitahiry ny finoana. Omen’ny Tompo antoka izay mino fa tsy maintsy ho tonga any an-danitra any amin’ny Tompo. « ary niara napetrany any an-danitra ao amin’i Kristy Jesoa » (Efes 2 :6). I Mosesy dia nahatazana lavitra ny tany Kanana. fa tsy niditra tany (Deo 32 :52) fa miandry ny mino rehetra.
2- Ho an’izay maniry ny tsara lavitra
Marim-pototra ny safidin’ny finoan’ny Patriarka. Tsy ilay Kanana ety an-tany no tanjon’ny finoana fa ny hitoetra any amin’Andriamanitra any an-danitra « ny tsara lavitra no iriny » (and 16). Vahiny sy mpivahiny ety an-tany ny mpino fa mponina any an-danitra. Efa mahita ny toerana itodiany ny mpino. Ny fiainan’ny mino izany dia mahita ny tsy hitan’ny maso. Any an-danitra no misy ny fonenana maharitra ho an’ny kristiana fa fandalovana no eto.
3- Satria tsy menatra azy ireo Andriamanitra
Ny tenin’ny Patriarka dia teny faminaniana avy amin’ Andriamanitra. Manaiky ho Andriamanitry ny mino sy izay matoky azy ny Tompo (Heb 8 : 10 ; Jer 31 :33 ; 32 :38). Raisiny ho vahoakany ny mino, ary Andriamanitra ho Andriamaniny. Tsy menatra antsika mpanota mibebaka ny Tompo. Izay maniry ny tsara lavitra dia tsy ho menatra mandrakizay satria tsy menatra azy ny Tompo. Malalaka ny toerana ho an’ny mino sady tsy mbola feno araka izay ambaran’ny fampianarana sandoka ankehitriny.
Inona ny antony ilazana fa tsara ny any an-danitra ?